यस्तो पो त वडा अध्यक्ष ? – Saurahaonline.com
यस्तो पो त वडा अध्यक्ष ?
गैडाकोट माघ १७ । गैडाकोट वडा नम्वर ४ का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष मात्रै होईन सारा गैडाकोट बासिहरुको प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएको छ । सकारात्मक सोचका धनी उहा जनप्रतिनिधिमात्रै नभै सफल उद्यमी समेत हुनुहुन्छ । यो धर्तीमा जन्म लिएपछि मानव भएर सकारात्मक काम गरेर समाजलाई सकारात्मक दिशामा अगाढीबढाउनु पर्छ भन्ने सोचका उहा यतिबेला आफनो सोच र बाल्यकाल देखिएको ईच्छा र चाहाना पुरा गर्ने दौडमा समेत हुनुहुन्छ ।
श्रम गरेर मात्रै देश बन्न सक्छ परिर्वतन आफैबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ । आफुले काम गरेमात्रै अरुलाई भन्ने अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्ने न्यौपाने आप्mनो वडा बासीका समस्या समाधानसंगै आफ्नो वडाको विकासमा अहोरात्र खटिईरहनु भएको छ ।
उहा बिहाना दिउसो वडाबासीको घरघरमा दौडने र नगरपालिकामा रोकिएका जनताका समस्या समाधानमा खटिने गर्नु हून्छ भने फुसदको वेलाको समय सदुपयोग गरी करिव २० हजार लेयर्स कुखुरा समेत पाल्नु भएको छ ।
राजनितिमा लागेर पैसाकमाउने होईन सेवा गर्नका लागी राजनिति गर्नु पर्छ भन्ने भावनाका उहा स्वार्थी र लोभि मानिसले जनताको सेवा गर्न नसक्ने बताउनु भयो । पैशा कमाउन व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने सोचका उहा सेवा संगै आफनो ब्यवसायमा समेत निकै खटिरहनु भएको छ ।
विगत १० वर्ष देखि कुखुरापालन ब्यवसाय गर्दै आउनु भएका न्यौपानेको खोरमा यतिबेला २० हजार कुखुरा छन् । करिब १० जना युवालाई उहाले रोजगार समेत प्रदान गर्दै आउनु भएको छ भने आफुलाई कान्छो छोराले व्यवसायमा सहयोग गरेको समेत बताउनु भयो ।
कुखुरा पालन ब्यवसायबाट आफुलाई मासिक ३ लाख सम्म आम्दानी हुने गरेको उहा बताउनु हुन्छ । जनताको काम बाट आफुलाई एक रुपैया पनि लोभ नभएकोर एक मानो खान कसैसंग दुई हात थाप्नु पर्ने अवस्था नभएकाले निस्वार्थ भावनाले आफनो वडाको बिकासमा लाग्ने उहाले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
आफनो ५ वर्षे कार्यकाल साच्चै नमुना र आफनो वडालाई नमुना वडाको रुपमा बिकास गर्न आफु लागेको र स्थानियहरुले सहयोग गरे ५ वर्ष भित्रका आफना वडाका सबै भित्री सडक विस्तारदेखी पिच गर्ने काम सम्पन्न गर्ने र अधिकांश युवालाई स्वरोजगार बनाउने समेत बताउनु भयो । काम गर्ने ईच्छा र चाहाना भए खाडी जानु नपर्ने उहा बताउनुहुन्छ । उहाभन्नु हुन्छ म स्वयम आफै उदाहरण छु अनि जनप्रतिनिधि पनि आफै म जहा जान्छु त्यहा युवा तथा वडा बासीलाई मेहनत गर्न सन्देश दिन्छु काम गर्ने तरिका समेत सिकाउछु ।
विकासका लागी गफनभै काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने न्यौपानेले ४ नम्बर वडा विकासका लागी धेरै बजेट निकासा गरी काम समेत सुरु गरिसक्नु भएको छ भने नया नया योजना बनाएर त्यसलाई सार्थक बनाउने दौडमा समेत हुनुहुन्छ ।